Ny rohy 2.20 dia eto miaraka amin'ny fanohanan'i Haiku sy ny fanamboarana bibikely | Avy amin'ny Linux
vao haingana ny fanombohana ny tranokala minimalista Links 2.20 dia natolotra, de tohano ny maody console sy ny sary ho an'ny fizahana tranonkala. Rehefa miasa amin'ny maody console dia azo atao ny mampiseho loko sy mifehy ny totozy, raha mifanaraka amin'ny terminal ampiasaina (ohatra, xterm).
Haingam-pandeha tokoa ilay browser, fa tsy mampiseho pejy maro araka ny tokony ho izy. Ny maody sary dia miasa na dia amin'ny rafitra Unix aza raha tsy misy ny X Window System na ny tontolon'ny fikandrana hafa, amin'ny alàlan'ny SVGALib na ilay framebuffer an'ny karatra graphique system.
Mandritra ny fampiasana ny rohy dia mihinana RAM eo amin'ny 2.5 MB eo ho eo amin'ny maodin-tsoratra sy sary 4.5 MB.
1 Inona no Vaovao ao amin'ny rohy 2.20
2 Ahoana ny fametrahana ny tranokala rohy amin'ny Linux?
Inona no Vaovao ao amin'ny rohy 2.20
Ao amin'ity kinova vaovao an'ny Links ity ny mpandraharaha no tena niasa fanitsiana mba hanomezana browser tsara indrindra ho an'ny mpampiasa, noho ny fandaharana nasongadina fa afaka mahita izany isika Nanamboatra bug izay afaka mandray anjara amin'ny fanafoanana anarana raha miditra amin'ny Tor.
Hatramin'ny nampifandraisanao tamin'ny Tor, dia nandefa fangatahana DNS tamin'ny mpizara DNS mahazatra tao ivelan'ny tambajotra Tor ilay mpizaha raha toa ka misy tag ireo pejy ho famahana ny anarana mavitrika (‹link rel =» dns-prefetch «href =» http: // host.domain / ›). Ny olana dia miharihary nanomboka tamin'ny andiany 2.15;
Ankoatr'izay Ny olana momba ny faran'ny cookie dia namboarina ihany koa ary nanohana ny algorithm zstd compression nanampy, ary koa ny fanohanana ny URL "file: // localhost / usr / bin /" na "fisie: // hostname / usr / bin /".
Rehefa miditra amin'ny Google ianao dia fantatra amin'ny anarana hoe "Lynx / Links" ilay browser ary mamerina kinova pejy tsy misy CSS i Google ho setrin'izany.
Para manatsara ny fifandraisana amin'ny totozy amin'ny navigateur, naneho hevitra ireo mpamorona fa mba hanomezana fifehezana totozy mora kokoa, ny andrana voalohany ankehitriny dia ny fampiasana "/ dev / input / totozy" fa tsy gpm.
Ary farany iray amin'ireo zava-baovao aseho ao amin'ny Links 2.20 dia ny nampiharina ny fanohanana izay ahafahan'ny mpitety tranonkala ampiasaina amin'ny rafitra fiasa Haiku, izay anampian'ity fanohanana voalohany voalohany ity ny katalaogin'ny fampiasan'ny browser.
Ahoana ny fametrahana ny tranokala rohy amin'ny Linux?
Ho an'ireo liana amin'ny fahaizana mametraka an'ity tranonkala ity amin'ny rafitr'izy ireo Azon'izy ireo atao izany amin'ny fanarahana ny torolalana zarainay etsy ambany.
Ny kinova vaovao an'ny Links 2.20 amin'izao fotoana izao dia azo alaina amin'ny alàlan'ny fampidinana ny kaody loharano an'io ary manangona.
Ho azy irery ihany tsy maintsy manokatra rune terminal izahay ary hanatanteraka ireto baiko manaraka ireto, ny zavatra voalohany tokony hatao dia ny misintona ny kinova vaovao amin'ny:
avy eo Hamoaka ny fonosana alaina amin'ireto baiko manaraka ireto izahay:
Ampidiro ny lahatahiry izay noforonina niaraka tamin'ny:
Ankehitriny dia hanohy ny fanangonana isika manatanteraka ity baiko manaraka ity:
Rehefa avy nahavita ny fikirakirana tao amin'ny terminal izahay dia manoratra:
Ary manatanteraka ny fametrahana miaraka amin'ny baiko isika:
Ary vonona miaraka amin'izany, efa hapetrak'izy ireo ity kinova vaovao ity.
Raha sanatria tsy te-hametraka amin'ity fomba ity ianao, azonao atao ny miandry andro vitsivitsy hametrahana ao amin'ireo trano fitahirizam-bokatrao.
Ka raha ny momba an'i Debian, Ubuntu ary ny derivatives dia tsy mila manoratra fotsiny izy ireo ao anaty terminal ity baiko manaraka ity:
raha mbola ho an'ireo izay Arch Linux, Manjaro, Arco Linux ary hafa Fitsinjarana miorina amin'ny Linux:
Farany ho an'ireo mpampiasa openSUSE napetraka miaraka amin'ireto baiko manaraka ireto:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Ny rohy 2.20 dia eto miaraka amin'ny fanohanan'i Haiku sy ny fanamboarana bibikely
Izaho dia manana rohy2 napetraka foana ary ampiasaiko rehefa misy pejy web manana doka sy boaty mitsambikina loatra, ny olana dia kely ho ahy ny haben'ny lahatsoratra ary mifehy ny fanaraha-maso aho + ary tsy mamaly izany, na ny fanaraha-maso na ny kodian'ny totozy Mila mampiasa vera fanamafisana aho ary manelingelina be. Hanampy ahy izany raha mahita fomba hafa hanandratana ny lahatsoratra fotsiny aho. MISAOTRA
Ny kinova vaovao an'ny BlackArch 2019/09/01 dia tonga miaraka amina fitaovana vaovao 150 mahery